Desktọpụ Cryptowatch: Ngwa iji nyochaa ahịa crypto ụwa | Site na Linux
Desktọpụ Cryptowatch: Ngwa iji nyochaa ahịa crypto zuru ụwa ọnụ
Taa, ọzọ, anyị ga-aba n'ọhịa nke DeFi World (Ego Etisaala Ego: Isi Iyi Ego Ozo). Maka ebumnuche ahụ, anyị ga-ekwu maka ngwa ọzọ na-atọ ụtọ ma bara uru "Desktọpụ Cryptowatch".
"Desktọpụ Cryptowatch", ọ bụ ihu ọma desktọọpụ interface nke web nke otu onye okike, a na-akpọ "Cryptowatch". Ya mere na ndị ọrụ ya nwere ike ịnụ ụtọ mpaghara niile nke uru ozi ya, ma nwee ike nyochaa ahịa crypto zuru ụwa ọnụ site na ha GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ na ndị ọzọ.
Ahịa na CoinTop: ngwa GUI abụọ na CLI iji nyochaa Cryptocurrencies
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-ahapụ onwe anyị icheta ma nye ozi bara uru banyere isiokwu a, ya bụ, mee ka ndị nwere mmasị, njikọ metụtara posts gara aga ya na isiokwu dị ugbu a. Ya mere, na ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ha nwere ike ịgbasawanye ihe ọmụma ha banyere mpaghara a:
Ahịa bụ ngwa eserese eserese eserese nke na-arụ ọrụ dị ka onye na-egwu egwu maka ebuka, ego na cryptocurrencies. Ọ bụ ezie, CoinTop bụ ngwa ngwa mmekọrịta onye ọrụ mmekọrịta (CLI) ngwa ngwa na nke dị fechaa maka ịchụso cryptocurrencies. Ahịa na Cointop: 2 GUI na CLI ngwa iji nyochaa Cryptocurrencies
1 Desktọpụ Cryptowatch: Ahịa Crypto nke oge
1.1 Gịnị bụ websaịtị Cryptowatch?
1.2 Kedu ihe bụ ngwa Cryptowatch Desktop?
1.4 Nbudata, ntinye, jiri na nseta ihuenyo
1.4.4 Ihuenyo gbaa
1.5 Ozi ndị ọzọ
Desktọpụ Cryptowatch: Ahịa Crypto nke oge
Gịnị bụ websaịtị Cryptowatch?
Ptnyaahụ bụ a nnọọ ewu ewu website na awade a ndịna-emeputa na arụmọrụ ọnụ ọrụ maka ahịa cryptocurrency. Iji nye ndị ọrụ ya, a interface dị ike iji nyochaa ọnụọgụ ego crypto, nyochaa mmegharị ahịa ahịa crypto, na ahia na isi niile saịtị mgbanwe (mgbanwe). Ptnyaahụ bụ ihe onwunwe nke Akpa Kraken.
Kedu ihe bụ ngwa Cryptowatch Desktop?
"Desktọpụ Cryptowatch" Ọ bụ obe-nyiwe desktọọpụ ngwa mepụtara iji kwe ka ndị ọrụ ya, na mpaghara ha site na kọmputa ha, wuo nke ha dashboard ahịa, n'ụzọ dị otú ahụ na ha nwere ike ịrụ ọrụ na ezigbo oge na nyochaa ahịa crypto zuru ụwa ọnụ nke mmasị gị.
Na mgbakwunye, ọ bara uru ịkọ nke ahụ na n'okwu nke ndị mmepe ya:
"Ndị ọrụ nke "Desktọpụ Cryptowatch" Ha ga-achọpụta na ngwa ahụ na-anabata ozi ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụdị ntanetị ndị ọzọ dị na ntanetị. Edere Desktọpụ na Rust na-eji usoro GUI nke Elm kpalitere. Iji nchara emeela ka ndị otu anyị mepụta ngwa cross-platform nke kachasị maka CPU na nchekwa nchekwa, ọnụego dị elu, na nkwụsi ike."
Ugbu a, "Cryptowatch Desktop" Ọ na-aga n'ihi na ya mụ version 0.3.2 na nwere ndị na-esonụ e ji mara:
Enyele magburu onwe interface imewe customization: Nke na-enye ohere ịhazi usoro ogwe iji kewaa ihuenyo ozi yana ihe achọrọ ma ọ bụ dị mkpa, dị ka eserese ọnụahịa, akwụkwọ ịtụ ahịa, oge na isi mmalite ahịa, na ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ nnọọ ìhè, ngwa ngwa na ume oru oma: Nke a na - enye ya ezigbo arụmọrụ ma na - ezere iji oke ihe IT (RAM, CPU), na - ezere iwe oke ọkụ nke ngwaọrụ eji, ma gosipụta nnukwu ozi ahịa. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, e mepụtara ya ịrụ ọrụ ụbọchị dum na-enweghị ịmanye kọmputa.
Ọ nwere ezigbo ikike iji hazie ogwe ozi: Ozugbo a haziri interface ahụ na ogwe ozi ozi achọrọ, a nwekwara ike ịhazi ya iji kwado ndị ọrụ gị, ekele maka ndepụta nhọrọ na ntọala na-eto eto.
Gụnyere njikọ zuru oke zuru ụwa ọnụ: Ekele dịrị ya na njikọ ya na mpaghara niile ejikọtara na Cryptowatch, site na njikọ njikọta ala dị ala.
Iji budata ya, ị ga-enweta gị ngalaba ngalaba nke «Cryptowatch Desktop» n'ime weebụsaịtị nke "Cryptowatch". N'ime ya, a na-enye ha ugbu a nchịkọta ngwugwu na Ọkpụkpọ Dianya (.deb) y abịakọrọ (.zip).
Na ohere a, anyị ga-eji usoro ahụ Dianya (.deb) na anyị ga-awụnye ya anyị na mbụ Respin (Nbudata Live na Installable Snapshot) omenala aha ya Ọrụ ebube GNU / Linux nke dabere na Linux MX. Ọ na-ama kachasị nke Akụkụ Ngwongwo Crypto, na-esote n'ọtụtụ ndụmọdụ, ndị ahụ gụnyere n'akwụkwọ anyị akpọrọ «Tọghata GNU / Linux gị ka sistemụ arụmọrụ dabara maka Ngwuputa Ngwuputa».
Downloadedbudata ya ngwugwu. (n'ihi na anyị bara uru ikpe) anyị nwere ike iwunye gị nke dị ugbu a 0.3.2 na-eji iwu a "Dpkg" o "Apt" dị ka ndị a:
Etinyeworị, "Desktọpụ Cryptowatch" nwere ike na-agba ọsọ site na Ngwa NchNhr nke ya GNU / Linux di ala, na acho otu onye nwere otu aha: "Desktọpụ Cryptowatch". Na ịmụtakwu banyere ya ọrụ na ikike, ị nwere ike ịnweta ya Ntuziaka Ntanetị N'ịntanetị.
Maka ama ndi ozo banyere nke a free ngwa, nke bụ ma free ma ọ bụ na-emeghe, mana nke ahụ nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ndị hụrụ Cryptocurrency n'anya, ị nwere ike ịga na njikọ 2 ndị a:
Kraken - Desktọpụ Cryptowatch
Blog Cryptowatch - Gini ohuru na Version 0.3?
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Cryptowatch», ihe na-adọrọ mmasị ma baa uru Desktọpụ ngwa (GUI) kere maka ndi ahu nwere obi uto Wa DeFi, kpọmkwem ndị ahụ kwa ụbọchị ahia (ha na ahia) dị iche Ego site na azụmaahịa na mkpa iji nyochaa ahịa crypto zuru ụwa ọnụ na ezigbo oge; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Desktọpụ Cryptowatch: Ngwa iji nyochaa ahịa crypto zuru ụwa ọnụ
Eddy sandoval dijo
magburu onwe m na m na-eji cointop ma emesiri m gbanwee usoro ahụ ma chefuo ya n'oge ahụ enweghị m onye nrụzi ụgwọ, ekele maka onyinye, ekele na ngọzi
Zaghachi Eddy sandoval
Ekele m, Eddy. Daalụ maka okwu gị. Na ee, CoinTop bụ magburu onwe ya na complements nke ọma na ahịa. Ihe ịga nke ọma na ọtụtụ ngọzi maka gị.
ABOS-P1: Explochọgharị nnukwu Alibaba Open Source - Nkebi 1